Mining rim bụkarịrị 5-PC rim, na-akpọ ise mpempe rim, ọ na-mere site ise iberibe nke bụ rim isi, mkpọchi mgbanaka, bead oche na abụọ n'akụkụ yiri mgbaaka. Nha rim na-ewu ewu bụ 25.00-25 / 3.5, 36.00-25 / 1.5, 27.00-29 / 3.0,28.00-33 / 3.5,17.00-35 / 3.5,19.5-49 / 4.0, 29.00-57 / 6.0, ruo 63 ″, ụfọdụ rim ahụ sitere na nha 51 ”ruo 63” bụkwa 7-PC. Mining rim bụ arọ dị arọ, ibu dị arọ na nnukwu ọsọ. HYWG na-enye akwa mkpuchi dị elu. Uru anyị bụ na anyị nwere igwe igwe anyị nke na-ewepụta ihe ndị dị ka mgbanaka mkpọchi, mgbanaka, mgbanaka akụkụ, oche bead site na anyị onwe anyị, anyị na-achịkwa ogo dị elu ma na-enye ọnụ ahịa ezi uche.
Akpa ebuli rim iru stacker rim na efu akpa handlers rim Kalmar
Chọrọ maka akpa ebuli rim na iru stacker rim dị nnọọ elu, ọ na-ejikarị eburu ibu dị elu (karịa 20 tonne) na nnukwu ọsọ, anyị na-anwale nnwale nke 13,00 x 33 rim ndị na-abịa iru ndị na-ejide ihe na ndị na-ejighị akpa na-enweghị ihe ha na-arụkarị na ebe dị mma. Styledị EM fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ na-agbaji na mgbanaka mkpọchi mkpọchi ma ha na-enweta ndụ dị mkpụmkpụ 2 ka 3 taya gbanwere. Ihe ndị ahụ rim na-enye anyị ogologo ndụ ikekwe 5 ka 6 gbanwere taya, na nsonaazụ a, echere m na EV rim ga-ebu ibu ahụ mgbe ọ dị oke elu mana ọ ga-adị mkpa idobe ọsọ ọsọ ka o kwere mee yana ịkwọ ụgbọ elu dị ka nke ọma kwere omume. Otu uru HYWG nwere bụ na anyị na-ewepụta ihe niile rim site na anyị n'onwe anyị gụnyere EM na EV ụdị eriri mmiri, oche bead na mgbanaka mkpọchi, anyị na-enye ogo a pụrụ ịdabere na ya na ngwaahịa dịgasị iche iche site na obere obere rim ruo na nnukwu rim.
OTR Rim mmiri dị iche iche site na 8 ″ ruo 63 ″
Rim mmirimkpọchi mkpọchi, mgbanaka akụkụ, bead oche, ọkwọ ụgbọ ala isi na Flange maka ụdị dị iche iche nke rim. Anyị HYWG bụ otu n'ime ndị nrụpụta ole na ole nwere ike ịmepụta ha abụọrim mmirina rim zuru ezu. Kemgbe ngwụcha afọ 1990 HYWG malitere imepụtarim akụrụngwama na-ebunye ndị ndu OTR zuru ụwa ọnụ dịka Titan na GKN. Taa HYWG nwere oke nkerim akụrụngwa site nha 8 ″ ruo 63 ″, site na OTR rim components iji forklift rim components, ha niile rim akụrụngwa bụ 100% emere n'ụlọ, anyị na-enye mma kwesiri ntụkwasị obi yana ọnụ ahịa ezi uche dị na ya.
Ewu ngwá OTR rim maka Grader China OEM emeputa
Anyị bụ ndị OEM rim soplaya maka nnukwu aha dị ka katapila, Volvo, Liebherr, John Deere na XCMG. Anyị nwekwara ike ịnye rim maka Komatsu, Hitachi, Doosan, Bell na JCB. Ngwaahịa anyị HYWGOTR rim Ejirila ọtụtụ ihe maka ọtụtụ ndị graders, ndị na-ebu wiil, ndị na-ebu ụgbọ mmiri na gwongworo. OTR rim dị oke mkpa maka ụgbọ ala ndụ na ịrụ ọrụ arụmọrụ, ọ dị mma OTR rim nwere ike ibu oke ibu ma nyere ndị ụgbọ ala ahụ aka na ọfụma ma rụọ ọrụ nke ọma. Ọ dị ezigbo mkpa ka ụgbọ ala OTR nwee siri ike, tụkwasịrị obi ma nwee ntụkwasị obiOTR rim. Ngwaahịa anyị HYWGOTR rim bụ ezigbo nhọrọ maka ndị nwe ụgbọ ala n'ihi na anyị egosipụtala mma, ọnụ ahịa dị mma na oke rim zuru oke maka ọtụtụ ụgbọ ala OTR.
Ihe forklift rim na-agbakọta ọnụ na taya iji buru ibu nke ugbo ala ma tụgharịa ngwa ngwa n'ọnọdụ dị iche iche. Forklift rim dị oke egwu maka ndụ ndụ oge niile na arụmọrụ arụmọrụ, ọ dị mma forklift rim nwere ike ibu oke ibu ma nyere aka fọọlụ na-agba ọsọ nke ọma ma rụọ ọrụ nke ọma. Ọ dị ezigbo mkpa ka forklift nwee ike, ntụkwasị obi ma dịkwa mfe ịrịgoforklift rim. Ngwaahịa anyị HYWGforklift rim bụ ezigbo nhọrọ maka ndị nwe ụlọ forklift n'ihi na anyị gosipụtara mma, ọnụahịa dị mma na ụdị forklift rim maka ọtụtụ ụdị. Anyị bụ ndị OEM rim emeputa maka nnukwu aha dị ka Linde na BYD.
Industrial rim maka Ọganihu inwego Tele handler China emeputa
Indozi ikpe eji otutu otutu uzo di iche iche dika ugbo elu, traktọ, kreenu, onye nlekota ndi ozo, ndi na-ebu azu, ndi na-acho ugbo ala wdg. rimuulu ulo oru ya mere o siri ike ịkesa ha. Mana imirikiti ha bụ usoro 1-PC na ogo dị n'okpuru sentimita 25. Kemgbe afọ 2017 HYWG malitere imepụtarim ulo oru n'ihi na ọtụtụ ndị ahịa anyị OE nwere ọchịchọ. Volvo Korea gwara HYWG ịzụliterimuulu ulo oru maka igwe na-egwupụta ihe na wiil. Otu Zhongce Rubber gwara HYWG ịzụliterimuulu ulo oru maka ọganihu. Ya mere na 2020 HYWG mepere ụlọ ọrụ ohuru na mpaghara Jiaozuo Henan iji lekwasị anya na mndozi ikpe producrion, ikike kwa afọ nke rim ulo oru Ezubere dị ka 300,000 rims kwa afọ.
OTR Rim components China OEM emeputa 25 ″ components
Rim mmiri mkpọchi mkpọchi, mgbanaka akụkụ, oche bead, igodo ọkwọ ụgbọala na flange n'akụkụ maka ụdị rim dị iche iche dịka 3-PC, 5-PC & 7-PC OTR rim, 2-PC, 3-PC & 4-PC forklift rims. Ihe 25 ″ bụ mainstream size nke rim akụrụngwa n'ihi na ọtụtụ ndị na-ebu wiil, ndị na-adọkpụ na ndị na-ekpofu mmiri na-eji 25 ″ rim. Rim mmiri ndị dị oke egwu maka ogo na ikike. Mkpọchi mgbanaka kwesịrị inwe ezigbo ekwedo iji jide n'aka na ọ na-akpọchi ndị rim na ugbu a mfe demount na elu. The bead oche ndị dị oké egwu maka ikike nke rim, ọ na-agba isi ibu nke rim. Ihe yiri mgbaaka bụ akụkụ ndị jikọọ na taya, ọ kwesịrị ịdị ike ma zuo oke iji kpuchie taya ahụ.
Ewu Equipment OTR rim maka Articulated Hauler China OEM emeputa
OTR rim ya mere akpọrọ n'okporo ụzọ rim bụ wheel rim maka apụ n'okporo ụzọ ugbo ala dị ka wheel loaders, dump gwongworo, graders, articulated haulers, dozers na ndị ọzọ na ụdị nke na-ewu equpments, Ngwuputa igwe na ulo oru ugbo ala. Ihe OTR rim a na - ejikọta ya na taya OTR iji buru ibu nke ugbo ala ma tụgharịa site na ọnọdụ siri ike. OTR rim dị oke mkpa maka ụgbọ ala ndụ na ịrụ ọrụ arụmọrụ, ọ dị mma OTR rim nwere ike ibu oke ibu ma nyere ndị ụgbọ ala ahụ aka na ọfụma ma rụọ ọrụ nke ọma. Ọ dị ezigbo mkpa ka ụgbọ ala OTR nwee siri ike, tụkwasịrị obi ma nwee ntụkwasị obiOTR rim. Ngwaahịa anyị HYWGOTR rim bụ ezigbo nhọrọ maka ndị nwe ụgbọ ala n'ihi na anyị egosipụtala mma, ọnụ ahịa dị mma na oke rim zuru oke maka ọtụtụ ụgbọ ala OTR. Anyị bụ ndị OEM rim emeputa maka nnukwu aha dị ka katapila, Volvo, Liebherr, John Deere na XCMG. Anyị nwekwara ike ịnye rim maka Komatsu, Hitachi, Doosan, Bell na JCB.
Construction Equipment OTR rim maka Wheel Loader China OEM emeputa
Ihe owuwu ihe owuwu bụ mgbe 3-PC rim ma ọ bụ 5-PC rim, na-akpọkwa n'ebe-mpempe rim ma ọ bụ ise-mpempe, ọ na-mere dị iche iche iberibe dị ka rim isi, mkpọchi mgbanaka, Flange, n'akụkụ mgbanaka na bead oche. Nha ndị ama ama na ngalaba a bụ 12.00-25 / 1.5, 14.00-25 / 1.5, 17.00-25 / 1.7, 19.50-25 / 2.5, 22.00-25 / 3.0,24.00-25 / 3.0 na 25.00-25 / 3.5. HYWG na-enye akara dị elu nke OEM gosipụtara dịka CAT, Volvo, John Deere ， Liebherr na XCMG. Uru anyị bụ na anyị nwere igwe igwe anyị nke na-ewepụta rim components dị ka mgbanaka mkpọchi, flange, mgbanaka akụkụ, bead oche 100% site na anyị onwe anyị, anyị na-achịkwa ogo dị elu ma na-enye ọnụ ahịa ezi uche dị na ya.